HERISETRA TAO IKALAMAVONY : Nifanesy novonoina tamin’ny fomba mahatsiravina izy mianaka
Vory lanona ireo mponina tao Tanambao Avaratra tsy lavitra ny Epp tao an-toerana, izay lalana mihazo an’i Malainkoafara, Fokontany Matsiatra Distrikan’ Ikalamavony, ny faran’ny herinandro lasa teo noho ny tranganana vono olona mahatsiravina. 31 juillet 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra dia raim-pianakaviana iray manodidina ny 42 taona, antsoina hoe Dariera no namoy ny ainy tamin’ny fomba feno habibiana. Voalaza fa nisy namono ity rangahy ity raha toa ka saika handeha hody hamonjy ny trano fonenany. Voaporofo tamin’ny fisavan’ny fianakaviana ny vatany tokoa tamin’ io fotoana io, fa feno dian-java-maranitra ny lohany ka avy hatrany dia nampandre ny mpitandro filaminana izy ireo mba hanokatra ny fanadihadihana.
Tamin’ny fanazavana voaray no nahalalana fa efa maty nisy namono ihany koa ny zanakalahin’ity antsoina hoe Dariera ity, ny faha-10 jolay 2019 lasa teo. Andro vitsivitsy taty aoriana nanaovan’ny zandary ny famotorana raha toa ka nanao fitarainana i Dariera manoloana ny fahafatesan-janany dia voasambotry ny fokonolona ilay nahavanon-doza tamin’ izay fotoana izay, ary voaporofo ihany koa fa mpiray tanàna taminy ity namono azy. Resaka tsindron’antsy no niseho rehefa kimamomamo izy ireo. Manoloana ny fitoriana napetrak’i Dariera an’ilay voarohirohy ho namono ny zanany anefa dia nametraka fitoriana rahateo koa ny dadaben’ilay tovolahy voaendrikendrika mba ho setrin’ny fitoriana azy ireo.
Ny mahatalanjona ny mponina manoloana ny zava-nitranga anefa dia mbola tsy voavaha akory ny olana teo aloha dia iny fa nisy namono tamin’ny fomba mahatsiravina indray i Dariera. Mbola eo am-panatanterahana ny famotorana lalina moa ny mpitandro filaminana ao an-toerana hatreto.